အယ်လ်အက်စ်ကိုးရီးယယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
စပိန်ဘုရင်၏ သမိုင်းဝင်အိမ်တော်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဆန် လော်ရန်ဇို ဒီ အယ်လ် အက်စကိုးရီးယယ် အား အများစုက မိုနက်စတီရီယို ဒယ်လ် အက်စကိုးရီယယ်လ် ဟု သိကြပြီး စပိန်ဘုရင်၏ သမိုင်းဝင် နေအိမ် ဖြစ်ကာ စပိန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် မက်ဒရစ်မြို့မှ အနောက်မြောက်ဘက် ၄၅ ကီလိုမီတာ (၂၈ မိုင်) အကွာရှိ ဆန် လော်ရန်ဇို ဒီ အယ်လ် အက်စကိုးရီးရယ်မြို့တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် စပိန်နိုင်ငံ၏ တော်ဝင်ဒေသများထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘာဆေးလေးကာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ တော်ဝင်နန်းတော်၊ ပန်သီယွန် နတ်ဘုရားကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်၊ တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်း နှင့် ဆေးရုံ အဖြစ် တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အယ်လ် အက်စကိုးရီးယယ်မြို့ အနီး တောင်ပေါ်၂.၀၆ km (၁.၂၈ mi) အကွာ (လမ်းအားဖြင့် ၄.၁ km [၂.၅ mi]) တွင် တည်ရှိသည်။
အက်စ်ကိုးရီးယယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ၊ မက်ဒရစ်*
ဆန် လော်ရန်ဇို အယ်လ် ဒီ အက်စကိုးရီးယယ်အား အဝေးမှ မြင်ရပုံ
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ စပိန်
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း i, ii,iv
အယ်လ်အက်စကိုးရီးရယ်တွင် သမိုင်းကြောင်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ အရေးပါသော ဗိသုကာဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး အစုအဝေး နှစ်ခု ရှိသည်။ တစ်ခုမှာ တော်ဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ ၅ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် ရှိသော လာ ဂရန်ဂျေးလား ဒီ လာ ဖရက်စ်နီဒါ အမည်ရှိသော တော်ဝင် အမဲလိုက် အဆောက်အဦးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အနားယူစခန်း ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် အလုပ်သဘာဝ နှစ်မျိုးရှိပြီး ၁၆ ရာစုနှင့် ၁၇ ရာစုတွင် စပိန်ဘုရင်၏ ဩဇာအာဏာ နှင့် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း၏ အရေးပါမှုတို့က တူညီသော ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဖော်ထုတ်ပြသမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အယ်လ်အက်စကိုးရီးရယ် သည် တစ်ချိန်က ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စပိန်တော်ဝင်နန်းတော် ဖြစ်သည်။မူလက ဟေရိုနမိုက် ဘုန်းကြီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပြီး စိန့် ဩဂတ်စတင်းဂိုဏ်းခွဲ၏ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းသားများ နေထိုင်သင်ယူသော ရီးယဲ ကော်လေဂျီယို ဒီ အယ်လ်ဖွန်ဆို ၁၂ အမည် ရသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် ဖိလစ် ဘုရင်သည် စပိန် ဗိသုကာပညာရှင် ယွမ် ဘော်တစ်စတာ ဒီ တိုလဲဒိုအား အယ်လ်အက်စကိုးရီးရယ် ရှိ အဆောက်အဦးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်းတို့တွင် သူ၏ တွဲဖက် အဖြစ် ခန့်ထားခဲ့သည်။ ယွမ် ဘော်တစ်စတာသည် သူ၏ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ကာလ အတော်များများကို ရောမတွင် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး စိန့်ပီတာ၏ ဘာဆေးလေးကာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ နေပယ်လ်မြို့ တွင်လည်း သူသည် ဘုရင်၏ နန်းရင်းဝန်ကြီးအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ နန်းရင်းဝန်ကြီး၏ ထောက်ခံမှုကြောင့် ဘုရင်က သတိထားမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ဘုရင်မှ သူ့အား တော်ဝင် ဗိသုကာ ပညာရှင်အဖြစ် ၁၅၅၉ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ဦးအတူတူ အယ်လ် အက်စ်ကိုးရီးရယ် အား ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာတွင် စပိန်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြသော အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများ အဖြစ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ 
၁၉၈၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂ရက်တွင် ယူနက်စကိုမှ ဆန် လော်ရန်ဇို အယ်လ်အက်စ်ကိုးရီးရယ် တော်ဝင်ဒေသအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အကြား ရေပန်းစားသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မက်ဒရစ်မှ နေ့ချင်းပြန် လာရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိကြသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အယ်လ် အက်စ်ကိုးရီးရယ် သို့ လာရောက်သူ ၅ သိန်းခန့် ရှိသည်။
↑ UNESCO (2008)။ The Monastery of San Lorenzo de El Escorial and Natural Surroundings။ 2008-06-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ unknown (2016)။ Identidad။ 2017-04-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mary Crawford Volk (1987-03-01). "Building the Escorial". The Art Bulletin 69 (1): 150–153. The Art Bulletin, Vol. 69, No. 1. doi:10.2307/3051093.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အယ်လ်အက်စ်ကိုးရီးယယ်&oldid=513530" မှ ရယူရန်
၃ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။